Muddo sanado ah, Baron wuxuu cadeeyay inuu awood u leeyahay inuu maareeyo tayada ugu sareysa iyo heerarka waxqabadka. Waxyaabaha filimka laastikada ah ayaa loo jarjarayaa si loo qaabeeyo loona dhejiyo walxaha aan qallalanayn. Naqshaddani waxay u oggolaanaysaa hooyooyinka inay si fudud u hagaajiyaan saxanka xafaayadda ilmaha ku haysa. Tikniyoolajiyadda casriga ah ee loo yaqaan 'Baron technology' waxay u oggolaaneysaa carruurta inay dareemaan sida xafaayad la'aan.
Saraawiil Napkin ah
Difaaca cajiibka ah waxaad si dhib yar u ogaan doontaa, 100% kiimikada nadiifka ah ee kiimikada, dooro Baron Lady Napkin Pant. Saraawiilkani waa kuwo dhuuban laakiin aad u nuugaya sababtoo ah nidaamka nuugista polymerka. Lakabka sare ee jilicsan, ee jilicsan ayaa daboolaya maqaarkaaga wuxuuna ku siinayaa nasasho aan la mid noqon karin.
Xafaayadda Baby Pant waxay u isticmaashaa filim dabacsan sida mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan. Meeleyn sax ah iyo ku xirnaanta sheyga xawaaraha wax soo saarka sareeya waxay u baahan yihiin habab farsamo gaar ah, iyo markii si guul leh loo dhammeeyo, waxay soo saartaa wax soo saar caato ah.
Bamboo waa geed si dhakhso leh u koraya oo ku nool qoyska cawska. Marka la farsameeyo in laga sameeyo dhar, markaa farsamo ahaan waxaa loo yaqaan dhar Rayon ah. Dharka Rayon sidoo kale waxaa laga samayn karaa waxyaabo kale sida cudbi ama saxarka qoryaha. Xafaayadaha bamboo ayaa ka nuugaya xafaayadaha suufka ah.
Si loo wanaajiyo heerka nolosha haweenka adduunka oo dhan, suufka caadada ayaa kala duwanaaday waxayna noqdeen kuwa diiradda saaraya baahiyaha xaaladaha haweenka: ilaalinta fudud, isticmaalka habeenkii, isticmaalka firfircoon, isticmaalka dabaasha, iyo cabirka caqliga badan. Baron wuxuu naqshadeeyay marwada Besuper maryaha caadada ee caadada lagu nadiifiyo, taas oo la cadeeyay inay tahay mid dabiici ah oo bey'ada ku habboon, waxayna ka caawisaa nadaafadda iyo caafimaadka inta lagu jiro muddada caadada oo dhan.
Haddii xafaayad kasta oo la isticmaalay ku daadiso qashinkaaga bannaanka wixii isbeddel xafaayad kasta ka dib caadi kuu ah, boorsooyinka xafaayadda la tuuri karo ayaa beddeli doona sida aad wax u qabato. Si fudud ku tuur xafaayadaha wasakhda ah boorsada, sug inta ay buuxinayso oo qashinka ku tuur.
Xafaayadda Eco Tayada Sare, Xafaayadda Ilmaha, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Xafaayad Dhal dhashay, Xafaayada la tuuro, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl,
Xafaayada la tuuro, Xafaayadda Eco Tayada Sare, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Xafaayadda Ilmaha, Xafaayad Dhal dhashay,